सुनचाँदीका मुल्यमा भारि गिरावट, आज एक तोलाको कति पर्छ ? - ramechhapkhabar.com
सुनचाँदीका मुल्यमा भारि गिरावट, आज एक तोलाको कति पर्छ ?
सुनचाँदी बजारमा साताको अन्तिम कारोबार दिन आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु १०० ले ओरालो लागेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९२ हजार ३०० मा कारोबार भएको पहेँलो धातुको मूल्य आज प्रतितोला रु ९२ हजार २०० तोकिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला रु ९१ हजार ७०० कायम भएको छ ।
बिहीबार यसको मूल्य प्रतितोला रु ९१ हजार ८०० तोकिएको थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु १५ ले घटेर रु एक हजार १८५ तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ७७७ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
गणपति लघुवित्तले बोलायो साधारण सभा, लाभांश कति ?
गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पाँचौ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । सभा पुष १७ गते ह्वाइट हाउस पार्टी प्यालेस, शुक्लागण्डकी नगरपालिका दुलेगौंडा, तनहुँमा हुनेछ ।
उक्त सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको कायम चुक्तापूँजीको १९ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश पारित गर्नेछ ।
साथै आव २०७८/७९ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट, सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट १ जना संचालक र स्वतन्त्त संचालक निर्वाचन गर्ने सभाको एजेण्डा रहेको छ ।
कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजन र लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पुष ७ गतेदेखि पुष ९ गतेसम्म बुकक्जोज गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार पुष ६ गतेसम्म कायम शेयरधीले मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश पाउनेछन् ।